Miaraha milamina amin'ny Photoshop amin'ny famoronana vondrona misy sosona | Famoronana an-tserasera
Tmiasa milamina amin'ny Photoshop famoronana vondrona sosona para conseguir mandamina ny asanay rehetra ary manomboka mifindra amin'ny maha matihanina marina an'ny Photoshop. Ao amin'ity programa majika ho an'ny digital retouch tsy ny zava-drehetra no mahafantatra ny fomba hamoronana vokatra tsy mampino nefa koa mandray ny mavitrika amin'ny asa izay mamela antsika miasa amin'ny fomba voafehy, milamina ary haingana amin'ny fomba ahafahantsika mahita singa (sosona) haingana.
Amin'ny fotoana maro dia hiara-hiasa izahay Photoshop izay hananantsika sosona an'arivony maro misy effets, fanitsiana ary zavatra maro hafa izay hahatonga antsika kakaô ara-tsaina rehefa miasa amin'ny ampahany manokana amin'ny volavolainay. Raha tianao miasa amin'ny fomba matihanina tokony manomboka mamorona iray ianao milamina sy mazava ny dinam-piasana, mavitrika izay mamela anao hahita haingana ny sosona rehetra. Amin'ity lahatsoratra hianaranao ny mamorona vondrona hivondrona sy handamina ny asanao rehetra.
Mamorona sosona fanitsiana
Hanao kilalao izahay fitaovana (hitantsika amin'ny horonan-tsary izy ireo)
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hanombohana dia sokafy ny rakitra ato aminay Photoshop. Mamorona antontan-taratasy vaovao izahay na mampiasa izay efa noforoninay hanombohana miasa.
Noho izany lahatsoratra namorona kely izahay namboariny haingana dia haingana, afaka hitantsika ny valiny farany miaraka amin'ireo sosonay eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny sary.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manomboka ampio sosona ao amin'ny antotan-taratasinay. Raha vantany vao ampiana ireo sosona, ny zavatra manaraka hataontsika dia omeo anarana indray izy ireo amin'ny sosona manome avo roa heny Click momba azy ireo.
Raha vantany vao nomenay anarana rehetra ny sosona antsika dia ny zavatra manaraka hataontsika dia mamorona vondrona. Ireo vondrona ireo koa tsy maintsy atao anarana tsara afaka miasa milamina araka izay azo atao.
Para mamorona vondrona mila fotsiny isika tsindrio ny kisary eo amin'ny ankavanana ambany, eo ambanin'ny faritra misy azy ihany.
Raha vantany vao vita ireo vondrona, ny sisa ataontsika dia ny hisintona ny sosona Ao anatin'ireto vondrona ireto, ity fomba ity dia samy ho ao anatin'ny vondrona misy azy avy. Izy io dia fomba iray azo ampiharina sy tena matihanina amin'ny fampiasana ity programa famerenana nomerika nomerika ity.
Fomba iray hafa hiasa tsara amin'ny Photoshop
Efa noforoninay ny vondrona misy anay ary notononina anarana sy nibaiko ny sosonay, izao ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manomboka zatra miasa saron-tava sy sosona fanitsiana. Mamela antsika ireto sosona ireto miasa amin'ny fomba voafehy na mahay aza manaova fanovana amin'ny sosona amin'ny fotoana rehetra.
Ny sosona fanitsiana dia mamela antsika hanao misy karazana retouching amin'ny fomba voafehy amin'ny alàlan'ny fametahana superlayer mifamatotra aminy. Mba hamoronana azy dia mila fotsiny isika tsindrio ny kisary fanitsiana ary safidio izay karazana fanitsiana tiana hatao. Isaky ny maniry isika manova ny masontsivana ny an'ny sosonay dia tsy maintsy avo roa heny isika Click momba azy.
Ny sosona manaraka tokony hampiasaintsika dia ny saron-tava. Ity sarontava ity dia mamela antsika fafao ny ampahany amin'ny sary iray nefa tsy very ny angona fampahalalana, afaka mamerina ny ampahany voafafa amin'ny sarinay izahay.
Ny famoronana ilay sarontava sosona dia tsy maintsy ataontsika mifidy sosona izay tianay hampiharana ny sarontava ary avy eo tsindrio ny kisary saron-tava.
Amin'io fomba fiasa tsotra io no hahatratrarantsika manatsara ny fandehanay ary manakaiky kely kokoa ny valin'ny matihanina. Aza adino ny miasa amin'ny fomba milamina indrindra foana satria tsy hiasa irery foana ianao fa ho ekipa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Miaraha milamina amin'ny Photoshop amin'ny famoronana vondrona sosona